Movistar eSIM yeApple Watch ichauya munaKurume 29 | Ndinobva mac
Sezvaungangove uchitoziva, imwe nguva yapfuura nyaya yeEIM yakatanga kumhara muSpain, asi chokwadi ndechekuti pakutanga Vodafone neOrange ndivo vaishandisa izvo zvakaita kuti zviwanikwe kune vashandisi veApple Watch, nevamwe vashandisi vakasara, asi izvo zvakadaro ivo kusvika.
Uye ndeyekuti izvi zvakafanana nenyaya yaMovistar, panaani isu taitoziva imwe nguva yapfuura kuti vaiigadzira, asi zvakadaro haisati yagadzirira veruzhinji, kunyangwe ichiita sekudaro pane ratove zuva rakarongwa rekuburitswa zviri pamutemo kweSIM yeApple Watch, Kunze kweiyo iPhone nePadad yanga ichiwanikwa kwenguva.
Kurume 29: iro richava zuva rekutanga reMIMistist's eSIM yeApple Watch
Mune ino kesi, kuburikidza nesocial network Twitter ivo vakagovana rumwe ruzivo nezve sevhisi iri mubvunzo, vachitidzosera isu ku chitoro chako chepamhepo, kupi Iyo Apple Watch mune yayo Cellular vhezheni yave kuwanikwa yekutenga-pre, ndiko kuti, iyo inoenderana neiyi eSIM.
Sezviri pachena, panguva ino hapana ruzivo rwakawanda rwuripo, kunyange chiri chokwadi kuti sezviri pachena Ivo vanopa mwedzi mitanhatu yebasa iri, kuva mushure menguva iyoyo mutengo wemamiriyoni manomwe emadhora pamwedzi sezvo zvichidikanwa kuve neMultiSIM, kunyange ichi chiri chimwe chinhu icho mutyairi achafanirwa kusimbisa zviri pamutemo, nekuti parizvino zvinoita kunge pasina mutengo wepamutemo chete webasa iri riri kutaurwa.
Nenzira iyi, kutanga unotevera Kurume 29, unogona kutenga zviri pamutemo yako Apple Watch mune yayo 4G (Cellular) vhezheni navo, uye Ivo vanozokwanisa kukupa iwe neyakakodzera macode ekushandisa yako eSIM neyako chishandiso muzvitoro zvepamutemo uye panhare yebasa revatengi nhamba 1004, kunyangwe kusvika ipapo uchafanirwa kumirira chimwe chinhu.
Pre-tenga yako Apple Watch Series 4G kuMovistar uye pamutengo wakanakisa. https://t.co/2YfGAt5tG2 pic.twitter.com/xKoeaqbkk9
- Movistar Spain (@movistar_es) March 12, 2019
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Movistar anozivisa iyo eSIM yeApple Watch yaKurume 29
Spotify inotumira chichemo chepamutemo kuEuropean Commission pamusoro peApple marongero akaiswa paApp Store neApple Music
Maitiro ekumisa iko kuita kwezuva kuApple Watch